Iqhaza landscape endabeni "Abampofu Liza". Isici indaba "Kubi Liza"
Ngasekupheleni kwekhulu le-18, i-isithakazelo esikhulu imisebenzi izincwadi Russian ngokuthi N. M. Karamzina. izinhlamvu zakhe bekhulume ngolimi olulula, njengoba kwakunjalo imizwa kanye nemicabango yabo ongaphambili. New kwakuwukuthi umbhali wabonisa obala ukuthi isimo sabo sengqondo nalokho okwenzeka futhi usinike isilinganiso. A indima ekhethekile kwaba kanye landscape. Endzabeni "Abampofu Liza" kuyasiza idlulisele umuzwa heroes, ukuqonda izisusa nezenzo zabo.
Yangasekhaya "abahahayo" eMoscow komkhathi omangalisayo zasemakhaya emfuleni nokukhanya, lezixuku aluhlaza, amasimu engapheli futhi amadolobhana amancane amaningana - ezifana izithombe okungafani avele nokuchaza indaba. They are kasibili enengqondo, ijwayelekile zonke izakhamuzi zomphakathi dolobha, okuyinto ekuqaleni enamathiselwe ukunemba indaba.
Panorama umphelelisi ilanga lakhanya tower ne Dome of Simonov futhi Danilov zezindela, efanekisela ngokuqondene umlando abantu abavamile, piously uyibeka. Futhi le Simonov Monastery iqala ajwayelane umlingisi lomcoka.
Lokhu landscape imidwebo sihlakulele ekuphileni kwezakhamuzi zakhona enhle bese ubeka ithoni lonke indaba. Isiphetho ongumlimi abampofu Lisa sasidabukisa: wakhulela eduze nemvelo, a ongumlimi intombazane evamile iba yisisulu ushwabadela yonke edolobheni. A landscape indima endabeni "Abampofu Liza" ukuthuthukiswa izenzo kuzokhulisa kuphela, ngoba izinguquko imvelo kuyoba ngokuvumelana ngokuphelele ukuthi kwenzekani izinhlamvu.
Ngale ndlela ukubhala imisebenzi yayingekho into eyingqayizivele: kuba isici esasenza sentimentalism. uya khona zomlando namasiko elinegama elifanayo ekhulwini le-18, sandile lokuqala ziye eNtshonalanga Yurophu okwesikhashana bese ezincwadini Russian. izici zako ezisemqoka:
the predominance wenkolo imizwa, okuyinto akuvumelekile classicism;
ukuvumelana zomhlaba engaphakathi iqhawe nge imvelo yangaphandle - yasemaphandleni landscape ebabazekayo (indawo lapho yena wazalwa futhi izimpilo);
esikhundleni se-sublime futhi onesizotha - a ethinta inhliziyo futhi izinkanuko, ehambisana nemizwa izinhlamvu;
umlingiswa oyinhloko sinikezwe izimfanelo elicebile elingokomoya.
Karamzin baba umbhali ezincwadini Russian, owakhuphula umqondo ka sentimentalism ekupheleleni futhi sezisebenza zonke izimiso zayo. Lokhu kuqinisekisa kwebalingisi kwendaba "Abampofu Liza", linendawo ekhethekile phakathi imisebenzi yakhe.
Isithombe umlingiswa oyinhloko
Uzungu unganakile libonakala lilula ngokwanele. Ophakathi nendawo uthando edabukisayo abampofu ongumlimi owesifazane (okuyinto okwakungafanele khona ngaphambi!) Umuntu othile wohlanga olukhulu abasha. bethuka behlangana landa ngokushesha lafinyelela uthando. Hlanza, uhlobo, efundile kude ukuphila edolobheni, egcwele ngokuzenzisa nokukhohlisa, Lisa ukholelwa ngobuqotho ukuthi umuzwa wakhe kuyinto mutual. Emizamweni yakhe ukuze sijabule, yena izinyathelo phezu kwezinkambiso zokuziphatha, okuyinto eye waphila njalo, onikeza kunzima ngempela. Nokho, indaba Karamzin sika "Kubi Liza" kubonisa ukuthi untenable kanjani lolo thando: maduzane kuvela ukuthi isoka lakhe bekhohliswa. Zonke isenzo senzeka khona ngaphansi kwesimo semvelo, lokuyindlela isibe ubufakazi unwitting enjabulweni angenamkhawulo kuqala, bese ungalungiseki usizi Heroine.
Umhlangano wokuqala ka abathandi egcwele injabulo ukuxhumana nomunye. lapho sihanjelwe yilaba babonisi ziyinto lomfula, ehlathini birch, kodwa kakhulu esikhathini ezintathu izihlahla kwesihlahla se-okhi ezimila eduze kwesikhungo echibini. Landscape imidwebo ukusiza ukuqonda ushintsho oluncane emphefumulweni wakhe. Amaminithi olude lokulinda, yena egxilile ukuzindla and akusho ukuqaphela ukuthi ingxenye akuzange kube njalo ukuphila kwakhe: lwenyanga esibhakabhakeni libhina ecula, umoyana. Kepha njengoba masinyane njengoba ayethanda, konke uguqulwa futhi iba kaLisa amahle ngendlela emangalisayo futhi eyingqayizivele. Kubonakala sengathi akukaze ngaphambili larks wakhe akazange ukucula kahle kakhulu, ilanga akuyona bekhanya njengezinkanyiso amasafire izimbali musa ukuhogela nice kangaka. Ugxile imizwa yakhe mayelana yini enye Angikhumbuli Lisa abampofu. Karamzin ucosha kwemizwelo Heroine, futhi nombono wabo nemvelo izikhathi ezijabulisayo ekuphileni Heroine liseduze kakhulu: kungumnikelo umuzwa injabulo, ukuthula nokuzola.
Kodwa kuza isikhathi lapho ukushintsha okumsulwa, ubuhlobo nengangcolile kuziwa ukusondelana ngokomzimba. Kanjani isono esikhulu ubona konke okwenzeka wakhulela ku imithetho yobuKristu Lisa abampofu. Karamzin futhi ugcizelela ukudideka yayo nokwesaba izinguquko ezenzeka ngokwemvelo. Ngemva kwenzekeni Phezu kwamakhanda amaqhawe izulu lavuleka, futhi kokuba isiphepho siqalile. amafu Black embozwe esibhakabhakeni, aphume owathela imvula, sengathi Imvelo uqobo lwayo ngalila "yobugebengu" ntombazane.
Umuzwa esongelwa inhlekelele kuqinisa kokusa ebomvu, bavele esibhakabhakeni ngesikhathi sokuvalelisa namaqhawe. Uyakhumbula yesigameko isimemezelo lokuqala uthando, lapho bonke labonakala liqhakazile, imisebe, ugcwele zokuphila. Eqhathanisa landscape imidwebo emazingeni ahlukahlukeneko wendlela ukuphila Heroine ukusiza ukuqonda ekuguquleni isimo layo langaphakathi ngesikhathi wokutholakala ukulahlekelwa inhliziyo yomuntu eziyigugu. Ngakho, indaba Karamzin sika "Kubi Liza" useye angaphezu isithombe zakudala nemvelo umsebenzi wobuciko. Kusukela izingxenye ezincane kuze kube yileso sikhathi, edlala indima umhlobiso, landscape isiyindlela ukudlulisa emhlabeni engaphakathi izinhlamvu.
Yokugcina izigcawu indaba
Uthando Lisa no-Erastu akuzange kuhlale isikhathi eside. Yimali futhi siyidinga impela imali yenkosi ngokushesha washada umfelokazi othile ocebile, eyayiwukuba le ntombazane buhlungu kakhulu kunazo. Wayengakwazi ukusinda amambuka futhi bazibulala. Heroine wathola ukuthula ku kakhulu endaweni lapho abahambi inkanuko ukuzedlula - ngaphansi kwesihlahla eduze ichibi. Futhi eduze Simonov Isigodlo, elivela ekuqaleni kwendaba. Indima landscape endabeni "Abampofu Lisa" kuleli cala kuyehla kube umkhiqizo esiyinhlanganisela futhi unikeza ukuphelela okunengqondo.
Iphela indaba ngekusasa Erastu hhayi ukuba zijabule futhi yayivamile ukuhambahamba ithuna lover wangaphambili.
Iqhaza landscape endabeni "Abampofu Liza": Imiphumela
Esikhathini ukuhlaziya umkhiqizo sentimentalism Awukwazi ukusho mayelana nendlela umbhali ekwazile ukuveza imizwa abalingiswa. I reception main - ukuzibekela idyll esekelwe wenhlanganyelo ngokugcwele imvelo yasemakhaya imibala yayo elikhanyayo futhi inhliziyo ehlanzekile impela, umuntu oqotho, okwakuwuphawu Lisa abampofu. Heroes, njengaye, ongenakuqamba amanga, sengathi, ngakho ngokuvamile isiphetho sabo yakhiwa kabuhlungu.
Esinye isici landscape - ukusiza umlobi ukuze abonise le umfundi ukukhulelwa ngemibono umsebenzi.
OBD-2. OBD-2 ukuhlola. Izinhlelo ukuhlola OBD-2